यस्तो रहेछ महिलाहरूलाई मन पर्ने यौनासन ! - Everest Dainik - News from Nepal
यस्तो रहेछ महिलाहरूलाई मन पर्ने यौनासन !
यौन सम्बन्धका बारेमा पुरुष र महिलाका रुचिहरू नितान्त भिन्न छन् । अनलाइन डाक्टरहरूको एउटा समुह: ‘सुपरड्रग अनलाइन डाक्टर’ले गरेको एउटा सर्वेक्षणका नतिजाहरूलाई आधार मान्ने हो भने उदेक लाग्दा तथ्यहरू खुल्न आएका छन् ।
यस सर्वेक्षणमा पुरुषहरूलाई मन पर्ने आसन र उनीहरूले यौन क्रियाका क्रममा गर्ने सबै गतिविधि महिलाहरूलाई मन नपर्ने खुलासा भएको छ ।
उक्त समूहले गरेको एउटा शोधमा एक हजार जनालाई यौन क्रिया सम्बन्धि विविध प्रश्न सोधिएका थिए । उनीहरूलाई प्रदान गरिएको प्रश्नावलीमा उनीहरूको मन पर्ने कुरा, मन नपर्ने कुरा सोधिनुका साथै उनीहरूलाई लागेको सबैभन्दा राम्रो र सबै भन्दा नराम्रो यौनासन बारे समेत प्रश्नहरू समावेश गरिएका थिए ।
सबैभन्दा दिक्कलाग्दो र सबैभन्दा मन पर्ने आसन
सर्वेक्षणमा भाग लिनेहरू मध्ये सबै भन्दा बढीले आफूलाई सबैभन्दा दिक्क लाग्दो आसन उभिएर यौनक्रिया गर्नु रहेको बताए । ५६.८ प्रतिशत महिला र ४२.७ प्रतिशत पुरुषहरूले यो आसन आफूहरूलाई साह्रै अप्ठ्यारो र तनाव दिने खालको रहेको बताए ।
सर्वेक्षणमा ५५ प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरूइले आफूहरूलाई ‘ओरल सेक्स’ मनन नपर्ने बताए । उनीहरूले आफूलाई यस्तो यौनक्रियामा कुनै रुची नरहेको र आफूले यसो गर्न नचाहने बताए । त्यसको विपरित ८८ प्रतिशत पुरुषहरूले आफ्नो मनपर्ने यौनासन नै ‘ओरल सेक्स’ रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
६६.७ प्रतिशत महिलाहरूले आफूलाई ‘मिसनरी’ अर्थात ‘पुरुष माथि रहने’ आसन मन पर्ने बताए । महिलाहरूलाई मन पर्ने दोस्रो असनमा चाहिं ‘स्पूनिङ’ अर्थात ‘दुई चम्चा आपसमा खप्ट्याए झैं कोल्टे सुतेर’ गरिने यौन क्रिया रहेको बताए ।
सेक्स टोयप्रति यस्तो छ धारणा
सर्वेक्षणमा भाग लिनेहरू मध्ये ६६ प्रतिशतले आफ्नो यौन जीवनमा ‘सेक्स टोय’हरूको प्रयोग गर्न चाहेको प्रतिक्रिया दिए । यी मध्ये ५८.९ प्रतिशत महिला र ४१.१ प्रतिशत पुरुषहरूले आफ्नो यौन साथीसँग ‘सेक्स टोय’ प्रयोग गर्न चाहेको बताए ।